ထိုင်းရောက်ITလူငယ်များ: October 2014
AIS Lava Iris 700 ကို Firmware ပြန်တင်နည်း
Ais တံဆိပ်ကပ် နောက်ထက်အသစ်ထွက်တဲ့ Lava 700 ဖုန်းတွေ အသုံးပြုကြတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အတွက်
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Firmware ပြန်တင်ခြင်တဲ့ သူတွေ အတွက် Firmware ရှာမရဘဲ ခေါင်မီတောက်နေတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အတွက် တာချီလိတ်က ကိုနေအောင်ကြီးက Backup ဆွဲထုတ်ပြီ ပြန်တင်ပေးထားတာပါ သူရဲ့ အင်တာလိပ်လိုင်နဲ့ Uploand ပင်ပင်ပန်ပန်နဲ့တင်ပေးတာ အထူကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကဲလိုအပ်တဲ့သူတွေ အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်နော်
Labels: AIS LAVA, AIS LAVA Firmware ပြန်တင်နည်း
Nokia Android Os သုံးဖုန်းတွေကို Root လုပ်နည်းနဲ့ Thai Font မပျောက်အောင် Myanmar Font သွင်းနည်း
ကဲ Nokia Android ဖုန်းတွေ ကိုင်ကြတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အထူသဖြင့်ထိုင်းက ဘော်ဒါတွေ Nokia Android
တွေ ကို Root ဖောက်ပြီ မြန်မာစာ ထည့်တော့ ရကြပါတယ် ဒါပေးမဲ့ Thai Font တွေပျောက်ကုန်ပါတယ်
Thai Font လဲမပျောက်းခြေင်ဘူ မြန်မာဖောင်လဲ အသုံးပြုခြင်တဲ့ ဘော်ဒါတွေ အတွက် Thai Font မပျောက်တဲ့
မြန်မာစာသွင်းနည်း တင်ပေးလိုက်တာပါဒီနေရာမှာ အရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ရမှာက Ko Djjoe Man
ကိုပါ အခုFont တွေကDjjoe Manလုပ်ထားတဲ့ Font တစ်ချို့ကို Modify အနည်းငယ်ပြန်လုပ်လိုက်တာပါ ကဲး
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:00 AM No comments: Links to this post
Labels: Nokia, Nokia Myanmar font သွင်းနည်း, Nokia X Root လုပ်နည်း
IMobile IQ 5.6A ကို Offical Firmware ပြန်တင်နည်း
IMobile IQ 5.6A သုံးတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အတွက် အကြောင်အမျိုးမျိုးကြောင့် Firmware ပြန်တင်ခြင်တဲ့ ဘော်ဒါတွေလိုအပ်တဲ့ဖိုင်းတွေ အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:39 AM No comments: Links to this post
Labels: i mobile, i mobile firmware ပြန်တင်နည်း
IOS 8xx အထက်ဖုန်းတွေကို One Click လေးနှိပ်ပေးရုံနဲ့ Jailbreak & Cydia App ကိုအလွယ်ကူဆုံးသွင်းနည်း
IOS 8 .xx အထက်တွေကို မကြာသေခင်က တရုတ်ထုတ် Tools နဲ့ Jailbreak လေထွက်ပြီ တစ်ချို့တွေ့ 
Jailbreak ဖောက်စမ်ကြည့်ကြပါတယ် အဲမှာ တစ်ခုက Cydia App တစ်ခါထဲ မပေါ်လာတာပါ
Cydia App ပြန်သွင်းဖို့အတွက် အလုပ်ရှုပ်ပြီ ဟိုစာရိုက်ထည့်ဒီစာရိုက်ထည့်နဲ့ လုပ်ဆောင်နည်း နည်နည်ရှုပ်ထွေစွာနဲ့ Cydia Appထည့်ရပါတယ် အခု အဲလို အလုပ်မရှုပ်ဘဲ One Click လေးနှိပ်ပေးရုံနဲ့
Cydia ကို အလွယ်ကူ သွင်းပေးသွားမှာပါ လိုအပ်တဲ့သူတွေ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 7:11 AM No comments: Links to this post
Labels: Apple, Jailbreak လုပ်နည်း
I Mobile နဲ့ တစ်ခြာ MTK သုံး Clone ဖုန်းတွေကို IMEI ပြန်ရေနည်း
ကဲ ဒီတစ်ခါ IMobile နဲ့ တစ်ခြာ MTK Clone ဖုန်းတွေ သုံးကြတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် IMEI ပျောက်ပြီ ဖုန်းဆက်မရလို့ တိုင်ပတ်နေတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် အလွယ်ကူဆုံး IMEI ပြန်ရေကြရအောင် ( မှတ်ချက် သိပြီသာ ဆရာကြီးများ ကျော်သွားကြပါ ) နည်းပညာ စလေ့လာတဲ့ သူတွေ အတွက် ဒီ Post ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ လိုအပ်တဲ့ဖိုင်းတွေ အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:05 AM No comments: Links to this post
Labels: China Clone, imei ပြန်ရေနည်း
Nokia Android OS ဖြစ်တဲ့ Nokia X,XL,X2,X+ စသည့်ဖုန်းတွေကို အလွယ်တစ်ကူ Firmware ပြန်တင်နည်း
ကဲ ဒီတစ်ခါ ဆိုင်သမားတွေ နဲ့ လေ့လာနေတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အတွက် အဖိုးတန်တဲ့ Nokia Android Os သုံးဖုန်းတွေကို အလွယ် တစ်ကူ ဘာ Box မှ မသုံးဘဲ Offical Firmware ပြန်တင်နည်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အရင်ဆုံ ကွန်ပျူတာမှာ Nokia နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Software Driver တွေ အရင်သွင်းထားလိုက်ပါ ပြီရင် မိမိဖုန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Firmware ဖိုင်းတွေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:30 AM No comments: Links to this post
Labels: Nokia, Nokia Firmware တင်နည်း
DTAC Joey Jump2( Zte V779M ) ဖုန်းတွေကို Firmware ပြန်တင်နည်း
ထိုင်းမှာ ဈေးသက်သာတဲ့ နောက်ထပ် DTAC ဖုန်းလိုင်ကုမဏီ တံဆိပ်ကပ် Zte ဖုန်းတွေ အသုံးပြုကြတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အတွက် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Firmware ပြန်တင်ခြင်တဲ့ သူတွေ ခေါင်မီတောက်အောင် ရှာစရာ မလိုဘဲ အေအေဆေ အလွယ်တစ်ကူ အဆင်ပြေအောင် အောက်မှာ Firmware ဖိုင်းကို ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
AIS Lava Iris 500 ကို Offical Firmware ပြန်တင်နည်း
ထိုင်းမှာ အခုနောက်ပိုင်ဈေးသက်သာပြီ လူသုံးများလာတဲ့ Ais တံဆိပ်ကပ် Lava ဖုန်းတွေ တော်တော်များများ ၀ယ်သုံးကြပါတယ် အထူသဖြင့် မြန်မာပြည်သာတွေ တော်တော်သုံးကြပါတယ် အဲဖုန်းက နဂိုး ယူနီကုဒ်ပါပါတယ် ဒါပေးမဲ့ ဇော်ဂျီရဖို့အတွက် Root ဖောက်ကြပါမယ် အခန့်မသင့် font ချိန်တဲ့ အခါ logo မှာရပ်နေပါမယ် ဒါဆို rom တင်ဖို့ ခေါင်မီတောက်အောင် ရှာ၇တော့မှာပါ rom ၇ှာမတွေ့ဘဲ တိုင်ပတ်နေတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အတွက် အောက်မှာ အဆင်သင့် ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 8:46 AM No comments: Links to this post
G-PAD 7.0 EXtreme4tablet ကို Firmware ပြန်တင်နည်း
ရှာရခက်တဲ့ G-PAD 7.0 EXtreme4tablet ရဲ့ Firmware လေ ရှာမတွေဘဲ ဒီတိုင်ချောင်ထိုးထားတဲ့
ဘော်ဒါတွေ အတွက် Firmware တင်နည်း post တင်ပေးလိုက်တာပါ အရင်ဆုံ လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်းတွေ အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 6:37 AM No comments: Links to this post
Labels: G Net, G Pad, G Pad firmware ပြန်တင်နည်း
I Mobile I Style Q4 ကို Offical firmware ပြန်တင်နည်း
I Mobile I Style Q4 သုံးတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Logo မှာ ရပ်ပြီ Firmware ပြန်တင်ခြင်တဲ့ သူတွေ အတွက် တင်ပေးလို က်တာပါ အခုကောင်က I Style Q4 အတွက်ဘဲ တင်လို့ ရမှာပါ I Style4အတွက် မဟုတ်ပါဘူ ကဲ လို အပ်တဲ့ ဖိုင်းတွေ အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 1:48 AM No comments: Links to this post
I Mobile IQ 5.6 Firmware တင်နည်းလေ့လာရန်
ကဲ imobile5.6 ကို firmware တင်ခြင်လို့အခက်ခဲဖြစ်ပြီ အကူညီတောင်ထားတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အတွက်
firmware တင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်းတွေ အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:10 AM No comments: Links to this post
Dtac Joey-Jump 3.5 Zte - V797 ကို offical Firmware ပြန်တင်နည်း
ထိုင်းမှာ ဈေးသက်သာပြီ သုံးရတာလဲ မဆိုတဲ့ Dtac တံဆိပ်ကပ် zte 797 ဖုန်းတွေ အသုံးပြုတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Firmware ပြန်တင်ခြင်ရင် လိုအပ်တဲ့ဖိုင်းတွေ အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:38 AM No comments: Links to this post
Nokia Android Os သုံးဖုန်းတွေကို Root လုပ်နည်းနဲ့ ...
IOS 8xx အထက်ဖုန်းတွေကို One Click လေးနှိပ်ပေးရုံနဲ...
I Mobile နဲ့ တစ်ခြာ MTK သုံး Clone ဖုန်းတွေကို IME...
Nokia Android OS ဖြစ်တဲ့ Nokia X,XL,X2,X+ စသည့်ဖုန...
DTAC Joey Jump2( Zte V779M ) ဖုန်းတွေကို Firmwar...
AIS Lava Iris 500 ကို Offical Firmware ပြန်တင်နည်း...
G-PAD 7.0 EXtreme4tablet ကို Firmware ပြန်တင်နည်...
I Mobile I Style Q4 ကို Offical firmware ပြန်တင်နည...
Dtac Joey-Jump 3.5 Zte - V797 ကို offical Firmwa...